Imisa sano ayaad ka maarmi kartaa isticmaalka baraha bulshada? - BBC News Somali
Imisa sano ayaad ka maarmi kartaa isticmaalka baraha bulshada?
Image caption Sawir taleefanka gacanta oo baraha bulshada laga isticmaalayo
Dadka u dooda xuquuqda aadanaha ee ku sugan Chad ayaa dalbanaya in dawladdu ay dib u soo celiso isticmaalka baraha bulshada kadib markii uu adeeggaasi muddo sanad ah jarnaa.
Xayiraaddan baraha bulshada waxaa dalka Chad la saaray 28-kii Maarso 2018-kii wax yar un kadib markii la soo gabagabeeyay shir qaran oo looga hadalay in isbeddal lagu sameeyo dastuurka, si uu ugu oggolaado Madaxweynaha Idris Debi in uu sii hayo talada dalka ilaa 2033-ka.
Maxaa baraha bulshada loo mamnuucay?
Baraha bulshada waxaa ka jiray abaabulo lagu dhaleecayn jiray Debi oo ah madaxwaynaha hada talada haya tan iyo markii doorashadii madaxweynenimo ee ugu dambeesay ay dhacday 2016-ka.
Dad badan oo reer Chad ah waxay BBC u sheegeen in Is abaabulkaasi uu ahaa mid wax tar leh, iyaga oo baraha bulshada adeegsanayana ay shacabka doonayeen iney ku abaabulaan dibad-baxyo lagaga so horjeedo dawladda.
Ma loo yaabaa xukunka madaxweynaha Chad Idriss Déby?
Dowladduna waxay shaqeysay inuu internetka uu khatar dhab ah uu ku noqday dawladda.
Qorshahaasi miyuu hirgalay?
Isticmaalka Facebook, Twitter, WhatsApp, iyo aalado kale, ayaa la xiray markii la fuliyey go'aanka ah in la joojiyo isticmaalkooda, tirada dibad-baxyada ayaana hoos u dhacday, inkasta oo ay dibadbaxyo goosgoos ah ay socden.
Xayiraaddu waxay inta badan khasaaro u gaysatay milkiilayaasha ganacsiyada yaryar, kuwaas oo ku tiirsan baraha bulshada oo ay isugu xayaysiin jireen macaamiishooda.
Mid ka mid ah qoraasyasha ugu cad cad ee reer Chad Deuh'b Emmanuel ayaa u sheegay BBC "Haddii aan Facebook la isticmaali Karin iyo baraha bulshada ,waxay la mid tahay in aad xabsi ku jiro".
Qaar ka mid ah dadka reer Chad ayaa ku guuleystay in ay ka talaaban arrintaan iyaga oo internetka ku isticmaalaya waxa loo yaqaanno "Virtual Private Networks (VPN)". Inkastoo VPN-ka isticmaalkiisa uu lacag la'aan yahay , dadka qaar ayaa u sheegay BBC inay ugu dambeyntii arritaan ay ka faa'iidaystaan shirkadaha isgaarsiinta iyadoo VBN-ka marka baraha bulshada lagu isticmaalo uu qaato waqti dheer iyo qarash badan .
Wasiirka arrimaha dibedda Chad oo loo doortay Gudd. M/Afrika
Si kastaba ha ahaatee, mamnuucistu waxay saameyn ku yeelatay tiro yar oo dad ah oo ku nool Chad. Sida lagu sheegay xogta ay soo ururisay Statistics World 4.9% oo keli ah ayaa dadweynaha Chad si joogto ah u isticmaala Internetka.
Image caption Madaxweynaha Chad Idriss Deby has been in power since 1990
Maxay dawladdu ka tiri arrinkaan?
Dadka xaquuqda aadanaha u dooda markasta waxay dawladda ku dhaleeceen jireen inay jartay baraha bulshada, haddana mas'uuliyiinta dowladda waa ay ka gaabsadeen.
Hase yeeshee hay'adda isgaarsiinta iyo boostada, Arcep, ayaa sheegtay in uu amarka kaga yimid wasaaradda arrimaha gudaha.
Arbacadii, la soo dhaafay afhayeenka dowladda Cumar Yaya Xuseen ayaa wariyaha BBC u sheegay in xayiraadda loo soo rogay "sababo la xirrira ammaanka darteed".
Maxay xayiraaddu muddo dheer u qaadatay?
Sida laga soo xigtay wariyaha BBC, xukuumaddu waxay baraha bulshada u aqoonsantahay inay halis ku yihiin dowladda oo ay caawiyaan dhaqdhaqaaqyada mucaaradka ee ka soo horjeeda Madaxwayne Debi ayaa wali ka jira dalka.
Bishii Febraayo ciidamada militariga Faransiiska ayaa waxa codsi uga yimid ciidamada Chad, si ay weerar ugu qaadaan baabuur oo hubeysan oo ka yimid Liibiya.
Sida laga soo xigtay saraakiisha ammaanka oo waraystay wariyeheena, xukuumadda ayaa aad u aaminsan in baraha bulshada ay awood u siinayso hoggaamiyeyaasha mucaaradku in ay dhallinyaro badan saamayn ku yeelan karaan iyagoo isticmaalaya baraha bulshada kuna qancinaya inay ka mid noqdaan mucaaradka.
Waxaa sidoo kale jira xaalado ah in shacabka rayidka ah ay gaysteen dilal sharci-darro ah , xadgudubyo iyo in ay soo dhigaan internetka, dawladduna waxay aad u doonaysaa inay joojiso arrinkaas.
Xukuumaddu ma soo celin doontaa isticmaalka baraha bulshada?
Waxay u muuqataa mid aan macquul ahayn in la soo celiyo isticmaalka baraha bulshada. Koox ka socota Qareenada Chad ayaa shirkado isgaarsiineed hor keenay maxkamad bishii Agoosto 2018-ki si ay u soo celiyaan adeegga baraha bulshada laakiin way ku guuldarreysteen dacwaddii.
Qareenada ayaa racfaan ka qaatay, laakiin maxkamad ayaa Khamiistii diiday racfaanka kiiskooda, iyada oo shegtay in "sababo amni" awgood lagu joojiyay baraha bulshada.
Urukan Qareenada, oo ay hoggaaminayaan Daïnoné Frédéric iyo Frédéric Nanadjingué, ayaa sheegay in ay haatan isku dayayaan in si ay xayiraadda u jabiyaan iney rabaan racfaankooda inay u gudbiyaan hayadaha caalamiga.